पोषण | Nepali Health - Part 4
February 12, 2019 Nepali Health Comment
January 26, 2019 Nepali Health Comment
गर्भावस्थादेखि जीवनको हरेक अवस्थामा बाँच्न, स्वस्थ रहन र पूर्ण रुपमा मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि मानिसलाई बिभिन्न पोषक तत्वहरुको आवश्यकता पर्दछ । यी मध्ये आयोडिन पनि एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व हो ।
December 25, 2018 December 26, 2018 Nepali Health Comment
November 6, 2018 Nepali Health Comment
१. अम्बामा भिटामिन ए,बी तथा सी पाइन्छ । अपच, ग्यास्टिक आदिका लागि अम्बा निकै लाभदायी मानिन्छ । यी रोगबाट पीडित व्यक्तिले प्रतिदिन २५० ग्राम अम्बाको सेवन गर्नु आवश्यक पर्दछ ।
मासु खाँदा ध्यान दिनुहोस् यी कुरामा
November 5, 2018 Nepali Health Comment
एउटा जवान मान्छेले एक दिनमा २५० ग्राम सम्म मासु खान राम्रो हुन्छ । मान्छेको एक किलोग्राम तौलका लागि एक ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ । दुई सय ५० ग्राम खसीको मासुमा सरदर ५० देखी ५५ ग्राम प्रोटिन हुन्छ । थप प्रोटिन अन्य खानाबाट पाइन्छ ।
October 1, 2018 October 1, 2018 Nepali Health Comment
दूध र दूधजन्य उत्पादन क्याल्सियमको प्रमुख स्रोत हो । क्याल्सियमले शरीरको मांसपेशी बलियो बनाउनका साथै हड्डी पनि दरिलो हुन्छ । त्यसो भन्दैमा दूध
August 26, 2018 August 27, 2018 Nepali Health Comment
आज रक्षा बन्धन वा भनौँ जनै पूर्णिमा । काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न जाती समुदायबीच क्वाँटी खाने चलन छ । विभिन्न गेडा गुडीबाट मिश्रित क्वाँटी स्वादमा मिठो त हुन्छ नै पोषणमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
August 6, 2018 Nepali Health Comment
१. हड्डी बलियो : किशमिशमा बोरोन नामक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नामक तत्व हुन्छ । जसले हड्डी बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
July 18, 2018 Nepali Health Comment
June 18, 2018 Nepali Health Comment
फलको राजा भनेर चिनिने आँप गर्मी मौसममा पाइने फलफूल मध्ये एक हो । आँपमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए, भिटामिन सी का साथै कपर, जिंक, पोटाशियम, मिनरल्स पाइन्छ । यसको नियमित सेवन गर्नाले शरीरलाई निकै फाइदाजनक हुन्छ ।